TAARIIKH: Luka Modric Oo Taariikh Cusub Looga Diiwaangeliyey Ciyaaraha Caalamiga Ah | Laacibnet.net
HomeKulamada Caalamiga AhTAARIIKH: Luka Modric Oo Taariikh Cusub Looga Diiwaangeliyey Ciyaaraha Caalamiga Ah
TAARIIKH: Luka Modric Oo Taariikh Cusub Looga Diiwaangeliyey Ciyaaraha Caalamiga Ah
Xiddiga xulka qaranka Croatia ayaa loo diiwaangeliyey taariikh cusub kulankii uu xulka qarankiisu ku garaacay Cyprus ee isreeb-reebka Koobka Adduunka.
Kubbad-sameeyahan ayaa jabiyey rikoodhkii ciyaartoyga ugu safashada badan xulka qaranka Croatia ee uu haystay difaacii kooxda Shakhtar Donetsk ee Darijo Srna.
Ciyaartii ay guusha koowaad ku xaqiijisteen isreeb-reebka Koobka Adduunka ee Group H, ayaa uu Modric ku noqday ciyaartoygii abid ugu safashada badnaa waddankiisa oo uu u ciyaaray 135 kulan.
Ciyaartii ay guul-darradu kasoo gaadhay Sabtidii ee ay la ciyaareen Slovenia ayaa uu ku barbarreeyey rikoodhkii safashada ee difaacii hore ee dalkaas ee Darijo Srna.
Laacibkan oo ay da’diisu tahay 35 jir ayaa xulka qaranka Croatia kusoo biiray sannadkii 2006, gaar ahaan bishii March taas oo ka dhigan in uu u ciyaarayay muddo 17 sannadood oo buuxa.
Waayaha Modric ee ciyaaraha caalamiga ah:
Kaddib markii uu ciyaartiisii ugu horreysay saftay sannadkii 2006, Modric ayaa illaa hadda dheelay 135 ciyaarood oo qarankiisa ah, waxaanu tan iyo muddadaas u dhaliyey 16 gool, isagoo ku hoggaamiyey saddex Euro oo ay ka qayb-galeen iyo saddex koob Adduun.
Sannadkii 2018ii ayay u ahayd midkii ugu wanaagsanaa isagoo waddankiisa keenay finalka Koobka Adduunka oo ciyaartii ugu dambaysay uu Faransiisku kaga badiyey 4-2 oo Koobkana laga qaaday.
Bandhiggii uu xilli ciyaareedkaas sameeyey, waxa uu ku mutaystay in uu ku guuleysto abaal-marinta xiddiga Adduunka ee Ballon d’Or iyo abaal-marinta Golden Ball ee laacibkii ugu wanaagsanaa Koobka Adduunka.
Rikoodhkiisa Real Madrid ee xilli ciyaareedkan
Kooxda reer Spain ee Real Madrid ayuu tiir-dhexaad u yahay, waxaanu xilli ciyaareedkan socda u saftay 36 kulan oo uu u 31 ka mid ah kusoo bilowday.
Isagoo warbaahinta la hadlayay kaddib ciyaartii ay horraantii bishan ku garaaceen Atalanta oo ay wareegga 16ka tartanka Champions League wada ciyaareen, Luka Modric ayaa yidhi: “Waxaan ahay 35 jir, laakiin waxaan dareemayaa sidii aan ahay 27 jir. Wanaag ayaan dareemayaa.”
Mohamed ibraahim says:
2006 March miyaa 17 sano oo rasmi ah laga joogaa mise 15 sano oo rasmi ah niman yahaw qoraalada qalad ka badan iska soo saxa plz